I-Oropesa - Costa Azahar - Umphakathi waseValencian - Spain
Ugu olwehlukahlukene nobulula bedolobha lakubo elidala yizici ezimbili ezigqame kakhulu kokuvela kukamasipala. Lapho umuntu engena ajula kancane emasikweni nasemasikweni edolobha, ifa lawo elingokomlando likhombisa ukubaluleka kwalo, liphikisana nezwe laseMedithera elijwayelekile.
Etholakala eduze koLwandle iMedithera, inamabhishi amaningi nama-koves amancane emvelo. Emizileni eseduze neSierra de Oropesa, i-panorama yezihlahla ezingamawolintshi ibonakala phambili, ifreyimu yolwandle. Ezintabeni kunezindawo zemvelo eziphikisana ne-seascape.
Futhi eMonte del Bobalar, ewela olwandle nasolwandle, ungajabulela izindawo ezinjenge-El Mirador, okuthi ngezinsuku ezicacile zembule ukubukeka komfanekiso weColumbretes Islands Natural Park.
Izimila zomdabu zalezi zindawo ziyisici.
Umnikelo wethu ku-Oropesa
Thola i-Oropesa nomlando wayo
Izindawo eziningi e- Costa Azahar
Ibhulogi ephelele ye- Costa Azahar
Yini ongayibona eCastellón: Izindawo eziyi-10 ongeke uziphuthe esifundazweni
Yini ongayibona eCastellón: Izindawo eziyi-10 ongeke uziphuthe esifundazweni.
Izindaba zakamuva zeCovid-19 emphakathini waseValencian kanye ne Costa Azahar.
22/09/2021 Ungayilanda kanjani ipasipoti yeCovid eMphakathini waseValencian Kusukela ngo-1 wokugcina
Ungayicela kanjani futhi nini i- 'Viatgem Tourist Pass' ozohamba ngayo kusuka ngoSepthemba
Ungayicela kanjani futhi nini i-'Vigegem Tourist Voucher 'ozohamba ngayo kusuka ngoSepthemba. I-
Ukusuka ePeñíscola kuye e-Oropesa del Mar, lawa ngamabhishi amahlanu abalulekile uma uhambela eCastellón.
Ukusuka ePeñíscola kuye e-Oropesa del Mar, lawa ngamabhishi amahlanu abalulekile uma uhambela
I-Aquarama ivula isizini nge-WOW, isilayidi esikhulu kunazo zonke eYurophu
I-Aquarama ivula isizini nge-WOW, isilayidi esikhulu kunazo zonke eYurophu Ipaki lamanzi
Ama-villas angama-51 anomlando omuhle eBenicasim
IBiarritz eMedithera: izindlu ezingama-51 ezinomlando omuhle eBenicasim Benicàssim Belle
Kuthuthukiswe ngu IbizaCrea